Shiinaha warshad dhagaxa dabiiciga ah warshad taallo taallo biyaha ilmagaleen waaweyn | Shaqooyinka Atisan
Warshad dhagaxa dabiiciga ah taallo weyn oo biyo mareen ah
Qaybta Badeecada ving Xardho Marmarka
Nooca: Marmar Isha
Waxyaabaha ： Marble Dabiici ah
Cabirka ： loo habeeyay
Gacanta lagu xardhay isha marmar dabiici ah, waad u isticmaali kartaa inaad ku qurxiso daaraddaada.
Taageerada Farsamada ee Internetka
Badda (Port Tianjin) .Air
Nadiifinta Heerka Sare
30 Maalmood gudahood
Marble, Stone, Granite, Travertine, Sandstone ama sida aad ugu baahan tahay
Qorrax dhaca marmar cas, marmar hunanwhite, granite cagaaran iyo wixii la mid ah ama la habeeyay
Sida shuruudaha macaamiisha
Farshaxanno yar yar 30 maalmood badiyaa. Farshaxanno waaweyn ayaa qaadan doona waqti dheeri ah.
Waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo qaabkaaga.
Goob, Gazebo, Sawir gacmeedka xayawaanka, farshaxan diimeed, Taalada Buddha, Dhagax dhig, Bust Dhagax, Xaaladda Libaaxa, Xaaladda Maroodiga Dhagaxa iyo Sawirada Xayawaanka. Ball Isha Isha Dhagaxa, Weelka Ubaxa Dhagaxa, Sawir gacmeed taxane ah, Dhalo dhagax, Miis xardhan iyo Kursi, Xardho Dhagax, Marmar xardho iyo iwm.
Qurxinta, bannaanka & gudaha, beerta, laba jibbaaran, farsamada gacanta, baarkinka
Gacanta lagu xardhay isha marmar dabiici ah, waad u isticmaali kartaa inaad ku qurxiso daaraddaada. Waxaan haynaa badeecooyin kala duwan oo xardhan marmar, sida isha, dabka, beero, tiir, taallo, bus, gargaar iyo ECT. Inta badan waxaa loogu talagalay jardiinada, villa, dariiqa, hoteelka iyo meesha ganacsiga iyo ect. |
Warshadeenu waxay ku qalabeysan tahay aqoon isweydaarsiyo casri ah waxayna abuurtay nashqado qaab dhoobo ah. Waxaan leenahay naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah iyo farshaxanno, waxaan u habeyn karnaa wixii farshaxanno ah oo ku saleysan naqshadahaaga ama shuruudahaaga. Waxaan ku fiicanahay farsamada gacanta, farshaxanada reer galbeedka iyo alaabada leh fikradaha reer galbeedka.
Horumarka wax soo saarka
1.Mudo intee le'eg ayay qaadataa in alaabtayda la qaado?
Wixii farshaxanno yaryar ah, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato gaarsiinta degdegga ah Waxay badanaa qaadataa 3-7days. Dhexdhexaad ama farshaxanno waaweyn, badiyaa waxaa lagu soo raraa badda. Badanaa waxay qaadataa 30 maalmood.
2.Ma aqaan karaa faahfaahinta amarkayga ee habka wax soo saar wakhti kasta?
Waxaan bilaabi doonnaa inaan sameyno ka dib markaad xaqiijiso maaddada iyo naqshadeynta. Tallaabo kasta oo wax soo saar ah, baako, iyo qaybo gaadiid ah, waxaan kuu soo diri doonnaa Macluumaad horumarineed oo faahfaahsan
3.Sidee loo rakibaa farshaxanimada?
J: Farshaxan kasta waxaa loo diri doonaa tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan rakibidda. Waxaan sidoo kale u diri karnaa koox shaqaale ah dibedda si loo rakibo
4. Sidee loo bilaabaa iskaashiga?
J: Waxaan xaqiijin doonaa naqshadeynta, cabbirka iyo maaddada marka hore, ka dibna go'aan ka gaari doonnaa sicirka, oo aan sameynaa heshiiska, ka dibna bixinnaa deebaajiga. Waxaan bilaabi doonaa xardho sheyga.
Hore: Qurxinta bannaanka naxaasta mermaid farshaxanka isha biyaha
Xiga: Bannaanka dabiiciga ah ee jardiinada jarmalka roogga dhagaxa raaxada leh
Taallada Biyaha Isha Maarta
Isha Naxa Beerta
Shiinaha qeybiyaha caadadii marmar biyo qaraami ah fo ...
Farshaxan naxaas qiimaha Factory gudaha iyo outd ...
Dhuxul dhagaxa marble hareeraha marwada qoob ka ciyaarka mar ...
Qurxinta beerta dhagax il biyo leh oo leh haween
Qurxinta biinka naxaasta ee ridaya qurxinta ...
Birta qadiimiga ah daadi weyn wal ...